2020 - Alinnpya
November 6, 2020 AlinnPya Comments Off on စားစရာမရှိ၍ထောင်ထဲမှာဘဲနေချင်တယ်ဟုဆိုကာရွှေဆိုင်တွင်ဆွဲကြိုးလုပြီးထွက်ပြေး
စားစရာမရှိ၍ထောင်ထဲမှာဘဲနေချင်တယ်ဟုဆိုကာရွှေဆိုင်တွင်ဆွဲကြိုးလုပြီးထွက်ပြေး စားစရာမရှိ၍ထောင်ထဲမှာဘဲနေချင်တယ်ဟုဆိုကာရွှေဆိုင်တွင်ဆွဲကြိုးလုပြီးထွက်ပြေးပြီးပြုံးစိစိဖြင့်အဖမ်းခံခဲ့သည့်အမျိုးသမီး ( ပုံတွင်ကြည့်ပါ ) ဝမ်းနည်းရမှာလား ? ဝမ်းသာရမှာလား ? မိထိုင်းရယ် 😀😂 နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက် ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒွန်ဌာနီမြို့ ဖိုးစီလမ်းမကြီးရှိ ယောင်ဝရတ် ရွှေဆိုင်ထဲသို့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုင်ထဲသို့ ဝင်လာကာ ရွှေဆွဲကြိုး ၁ ဘတ်သား ၅ ကုံးကိုယူကြည့်ကာ “ ကျွန်မယူသွားမယ် “ နော်ဆိုပြီး ထွက်ပြေးဟန်ပြုမူခဲ့သဖြင့် အသက် […]
October 31, 2020 AlinnPya Comments Off on အောင်လအန်ဆန်ပွဲကြည့်ရင်း ပူတာအိုက အဖိုးတစ်ယောက် သေဆုံး
အောင်လအန်ဆန်ပွဲကြည့်ရင်း ပူတာအိုက အဖိုးတစ်ယောက် သေဆုံး အောင်လပွဲကြည့် နေရင်း ရှုံးသွားပြီးနောက် မတ်တပ်ထလိုက်ချိန်လှဲကျသွားပြီး သွေတိုးရောဂါ အခံရှိသည့် ပူတာအို လေယဉ်ကွင်း ရပ်ကွက်(၃)က အသက်(၆၀) ကျော် အဖိုးဦးဆန်နိုင်ဆင် ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်ကို စိန်ခေါ်သူ ဟော်လန်နိုင်ငံသား ဒီရစ်ဒါ က ပထမ အချီမပြီးခင်မှာတင် ချုပ်ကွက်နဲ့ အနိုင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်ဟာ သူ့ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ရွှေခါးပတ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါပြီ။ အောင်လပွဲကြည့် နေရင်း […]
အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကို လက်မလွှတ်ဖို့ တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရန်
October 30, 2020 AlinnPya Comments Off on အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကို လက်မလွှတ်ဖို့ တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရန်
အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကို လက်မလွှတ်ဖို့ တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရန် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ🙏။ အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ONE Championship အဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ဒီနေ့မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲကိုခေါင်ပွဲအဖြစ်၊ စိန်ခေါ်သူRienner De Ridderနဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ONE Championship က ဖိုက်တာ တွေကတော့ အောင်လအန်ဆန်း က အနိုင်ယူပြလိမ့်မယ်လို့ တစ်ညီ တစ်ညွတ်ထဲ ခန့်မှန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သံကိုအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် ေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းကို လက္မလႊတ္ဖို႔ တိုက္ရိုက္ Live ၾကည့္ရန္ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ🙏။ […]